Diiwaangeli ilmahayga ee dugsiga | USAHello | USAHello
Si aad ilmahaaga u bilaabaan dugsiga ee USA waa in aad marka hore aad ilmahaaga uga diiwaangeliso sida ardayga. Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay in ay soo booqdaan dugsiga iyo saxiixa waraaqaha si dugsiga aqbali karaan ilmahaaga. Baro waxa qorayaa aad u baahan tahay iyo sida ilmahaagu dugsiga si ay u diiwaan. Read ku saabsan meeleynta iyo fasalo gaar ah. Read ku saabsan ilmaha baahida waxa aad, waxa la sameeyo haddii ilmahaagu maqan yahay, iyo sida loo helo dugsiga.
Waa maxay dugsiga ilmahaygu tegi doonaa?
Sannadka uu ilmahaagu waxa uu ku dhashay iyo meesha aad ku nooshahay ayay ku xiran tahay dugsiga carruurta si aad u tegi doonaa. Raadi dugsiyada dadweynaha ee degaankaaga.
Waa maxay waraaqaha ayaan u baahan tahay in carruurta aan dugsiga iska diiwaan?
waraaqaha muhiimka ah ka mid noqon kara:
Cadaynta degenaanshaha degmada dugsiga. Taas macnaheedu waxa aad leedahay si ay u muujiyaan in aad ku nooshahay gurigaaga ama guri. Tusaalooyinka caddeynta deegaanka waxaa ka saxeexdo heshiis kiro guri, war bangi, ama biilasha korontada ah oo leh cinwaan ah. Tani waa si ay u muujiyaan in aad ka tagto in xaafad halkaas oo dugsiga iska diiwaangeliyo carruurta.
Caddeyn da'da. Tusaale ahaan, shahaadada dhalashada ama baasaboorka la xusuustay dhalashadii ilmahaaga.
Degmada dugsi ayaa laga yaabaa inay u baahan yihiin kulan la qaatay maamulka dugsiga si aad u hesho ardayga si buuxda u diiwaan gashan.
Degmo walba ayaa laga yaabaa in ay qaab u gaar ah marka aad iska diiwaan gelin ilmahaaga dugsiga. Raadi foomka internetka ee dugsiga degmada. Waxa kale oo aad tegi kartaa dugsiga oo waydii in aad la hadasho xoghayaha dugsiga.
Goorma ayaan diiwaan ilmahayga ee dugsiga?
Inta badan dugsiyada dalka Maraykanka bilaabi dhamaadka xagaaga ama horraanta dayrta, in August ama September. Haddii aad timaaddo Maraykanka ee xagaaga, waxaad booqan kartaa dugsiga ilmahaaga in July ama August si ay u bartaan sida loo qorto. Haddii aad timaado ee dalka Mareykanka inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, waa in aad u qorto ilmahaaga sida ugu dhakhsaha badan.
carruurtayda Ha u leeyihiin in ay tagaan dugsiga?
imaanshaha Dugsiga waxaa looga baahan yahay ardayda oo dalka Mareykanka ah ee da'doodu lix iyo inta u dhaxaysa 16. In qaar ka mid ah dalalka, da 'ah waxaa laga yaabaa kala duwan by hal ama laba sano. Waad awoodaa ogaato da'doodu u ah iyo tiro ka mid ah sano ee gobolkaaga.
Imaanshaha joogtada ah waa mid aad muhiim u ah ardayga. Dugsiyada socoto imaanshaha. Waxaad ka heli kartaa in dhibaato sharciga haddii ardaygu maqnaado maalmo badan dugsiga. Waxaad ka heli doontaa digniin badan haddii ardayga uu bilaabo inuu seego maalmood aad u tiro badan. Tirada saxda ah waa kala duwan ee dugsiyada degmooyinka kala duwan.
maqnaanshaha waa marka ay kaa maqan yihiin dugsiga. Dugsiyada badankoodu waxay leeyihiin 2 noocyada kala duwan ee maqnaanshaha. The 2 Noocyada ay yihiin cudur daar maqnaansho iyo maqnaanshaha cudurdaar la'aanta.
Tusaalooyinka Maqnaanshaha cududaar
Hakinta, talaabo edbin laga qaado ardayga taas oo muujinaysa dhaqanka aan la aqbali karin
xaaladaha cimilada Khatarta meesha aad ma ka heli kartaa dugsiga si nabad ah
La'aanta gaadiidka idman (tusaale ahaan, haddii baska ma muujiyaan aan kor)
Fasax laga maamulaha
Booqo campus kulliyad
Work, haddii qayb ka mid ah barnaamijka waxbarashada iskaashi la ansixiyey
Ka qayb-gaaban ama waqti-buuxa ah shaqada
ciyaarta kooxda isboortiga Dugsiga ama tartanka
kooxda dugsiga maalgaliyo, ama dhacdo gaar ah dhaqdhaqaaqa
Tusaalooyinka maqnaansho aan raalli
Ka maqan dugsiga iyada oo aan u sheegay dugsiga ka hor
gefo (Ma doonayo inaan) fasalka
In iskuulka laga daaho. In dabayaaqadii waxaa kaloo loo yaqaan daaheen a. Daahitaan cududaar karo oo aan cudurdaar lahayn. daahitaan cududaar leh waxay leeyihiin liiska la mid ah sida maqnaanshaha raalli.
Ardaygu wuxuu had iyo jeer ka masuul ah shaqada oo dhan isaga ama iyada ayaa seegay. Waxaad, ama waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah, ayaa mas'uul ka ah u sheegay dugsiga sababta maqnaanshaha. U sheeg dugsiga adigoo wacaya xafiiska xafiiska ama imaanshaha, ama qoraal iyo saxiixa note ah in macalinka, xoghayaha, ama maamulaha. Haddii aad ogtahay in ilmahaagu dugsiga ka maqnaan doona ka hor wakhtiga, waxa fiican in aad u sheegto dugsiga ka hor. Mararka qaarkood, maqnaanshaha waa lama filaan ah. Taasi waa okay. Wac dugsiga subaxdii ama maalinta ku xigta.
Maxaad carruurta aan dugsiga uga baahan yihiin?
Ardayda sida caadiga ah waxay leeyihiin in la keeno sahayda, ama qalab, dugsiga iyaga la. bogga internetka ee dugsiga degmada, bogga internetka ee dugsiga, ama macallinka fasalka yeelan doonaan liiska. Liiska noqon kartaa kala duwan ee fasalada kala duwan.
warqad buug iyo qalin ama qalimaan waxaa sida caadiga ah loo baahan yahay. A gal saddex-giraanta ama fayl si uu u qabto waraaqaha sidoo kale waxtar leh.
qalabka dugsiga ka heli kartaa qaali. Wargeyska ayaa ugu fudud, qalin, iyo qalimaan shaqeeyaan. Uma baahnid in aad si ay u iibsadaan ugu caansan ama fanciest. Mararka qaarkood, macalimiinta ama dugsiyada leeyihiin sahayda dheeraad ah oo ku siin kara haddii aad u baahan tahay. Dugsiyada ama bulshada ama ururada diinta mararka qaarkood iska bixin qalabka dugsiga. Search for sahayda dugsiga caawin labo toddobaad ka hor intaan dugsigu bilaaban. Inta badan abaalgudka uu noqon doono ka hor sanad dugsiyeedka bilaabo.
Sidee carruurta ah iga heli doontaa dugsiga?
Badanaa dugsiga degmooyinku bixiyaan gaadiidka si aad u hesho dugsiga. Haddii aad ku nooshahay meel u dhow dugsiga, dugsiga ka fili karto oo aad ku socon karto ama baaskiil. bogga internetka ee dugsiga degmada yeelan doonaan macluumaad ku saabsan bas iyo gaadiidka. Waxay kuu sheegi doona meesha ay sugaan baska iyo wakhtiga baska waxay noqon doontaa meesha joogsiga. La xiriir xoghayaha dugsiga ee ku saabsan macluumaadka gaadiidka.
Dugsiga degmo ka fiirsan gaadiidka mudnaan ardayga, ma xaq ardayga. mudnaan waxaa lagu qaadan karaa haddii ardayda aan si fiican u dhaqmayaan. Raacitaanka baska dugsiga wuxuu u baahan yahay dabeecad la mid ah sida isagoo dugsiga.
Waa maxay talaalka?
Tallaalada waa darbo in carruurta ee dalka Mareykanka waxaa caadi ahaan looga baahan yahay inay u leeyihiin in ay tagaan dugsiga. Shuruudahaas waxaa ka duwan dugsiga degmada. Waxaa mararka qaarkood meesha ka by sharciyada gobolka. Ilmahaagu u baahan yahay in dhammaan tallaalada looga baahan yahay ama u baahan yahay inuu qabto dhaafitaanka muujinaya sababta ay u hana ku leeyihiin. Records talaalka waxaa sida caadiga ah loo baahan yahay qorin arday ama marka ay dugsiga bilaabayaan.
Maxaa carruurta wax bay cuni doonaan dugsiga?
dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka bixiyaan qado-lacag jaban ama lacag la'aan ah caruurta maalin dugsiyeed kasta. Kani waa barnaamij dowladu maalgeliso yeedhay Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka. Xaddiga lacagta qoyska kasbada go'aamiso in ardayga u qalma in ay helaan qado lacag la'aan ah, qado qiimaha la dhimay, ama innaba. degmooyinka dugsiyada Qaar ka mid ah warbixin u diri guriga ku saabsan Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka. Weydii xoghayaha dugsiga wixii macluumaad dheeraad ah.
Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan quraac oo qayb ka ah barnaamijkan. Dugsiyada qaarkood waxay ardayda qoysaska dakhligoodu yar yahay ee isbuucaan siiyaan cunto, nasashada dugsiga, ama fasaxa xagaaga. xoghayaha dugsiga wuxuu ka hadli karaa wixii ku saabsan qado lacag la'aan ah oo la dhimay. Or, xoghayaha dugsigu ay ku caawin doonaan inaad hesho qofka ku caawin kara.
dugsiyada dadweynaha ee America